Duruus Ba Ku Duugan Suuganta.! WQ- Abdisalaan Mahdi. | Haqabtire News
Duruus Ba Ku Duugan Suuganta.! WQ- Abdisalaan Mahdi.
April 29, 2017 - Written by admin
Shaandhaynta iyo kala dhigdhigida weedhihi ay ku maansoon jiren Abwaanada Soomaaliyed waxa ay ku sahlaysa ogaanshaha Taarikh kaa qarsoonyed iyo Barashada Cilmi u wakhtigu soo dhigay. Taarikhduna Waa ki Xaaji Aadan laha.
Taarikhdu wayno musbaax maanka caawimo`e Adigoo malo gudaayad yaqiin marar ku gaadhaye Makaankaga waa inaad taqaan meelba waxa yaale.
Haddaba waxa jirata Sheeko dhexmartay Abwaan Gaariye AHN iyo Jabhadihii Taliska la dagaalamayi kuwaaso Abwaankuna u ka mid ahaa. Gaariye kolkii u yimi masraxii Siyaad laga ga so horjeeday ayuu dareemay innay walaxi qaldan tahay, haddii aan hadda la qabanna ay hadhow fogaanayso wuxuna Saxansaxo ku yidhi
`Haya-cala salaa iyo haddeer, ereyba waa saace”
Haddaba Gaariye muxu ka digayi muxuse ka si arkay dhabhaas haddii lagu sii socdo ? Dhab ahaanti Jabhadihi waaga jiray waxay ahaayen kuwo dareen la kacay, oo dhibtii Bulshada lagu hayay ka fal-celinteed Qoriga u qaatay. Waxa se dhibtu ka unkatay belo so dhax gashay Jabhadihii taaso ardaa ardaa shah u kala shubtay waana Qabyaaladdii. Haddaba Abwaanku kolka u arkay SSDF iyo SNM o kala yaala ayuu wuxu go`aansaday in u tilmaamo wadiiqada guusha; wuxuuna Waayo-arag ku yidhi.
Waxaan u taagnahay Jabhad lagu walaal yahay
Muddo ka dib markii isbadal so onkodi waayay ee Jabhadihii SSDF iyo SNM isu af garan waayen shirkii Herar ka dhacay, ayaa Abwaan Gaariye dhaliilihisi dagaal kuso qaaden. Gaariyo Gar-naqsi kaga warramayana wuxu yidhi.
Markii guun furaba Haddii godoodle kale Geed-fadhiisi yahay Garba-duub horiyo Gensina iska jiray Aniguna gabyaa Xil gubayo ahay Oo aan Gobaad Wixii kula gudboon Tasho gooshkan idhi Ma ii gaalnima.?
Run ahaanti Abwaanku kama so horjeedin la dirirta Taliskii waaga jiray, duulana kuma ahayen Jabhadihii waagas. Se waxa uu weerar ku ahaa hab-fikirkii Jabhadihii u ka midka ahaa, wuxuuna sii arkay in rididda Siyaad ay ka daran tahay marxaladda xigita; oo Guunka soo geed-fadhistay ayaa ah Qorshe la`aanta iyo kala qaybsananta haleeshay Jabhadihii. Xaqiiqdina dhibtan Somaali wal ba haleeshay nusqarnigii u danbeeyay waxa keenay Qorsho la`aantii waagas lagu hawl galay. Haddaba Duruusta ku duugan dhacdadan ayaa ah Qorshaha iyo Midnimadu in ay yihin labada la gu hawl galo kolka geeddiga lo raro xagga Guusha.
W-Q: Cabdi M Cirro
“Islaamku Wuu Xaaraantimeeyay Wanaag Aad Tidhi Dariiq Xun Baan U Marayaa, Haddii Aad Doonayso Inaad Kursi Hesho Waa Inaad Dariiq Toosan Marto..” Sheekh Aadan Siiro
Ciidamo Gadoodsan Oo Ka Cabanaya Mushaar La’aan Oo Xidhay Waddooyinka Magaalada Garoowe
60 Qof Oo Ku Dhintay Tareen Dad Ku Jiidhay Dalka Hindiya
Sucuudiga Oo Markii Ugu Horreysay Qirtay Dilka Weriye Jamaal Khashgooji